Rugby : «Tsy ekena ny hivarotana ny kianjan’Anosizato», hoy Rakotomalala Marcel | NewsMada
Rugby : «Tsy ekena ny hivarotana ny kianjan’Anosizato», hoy Rakotomalala Marcel
Olana lehibe mbola sedrain’ny fanatanjahantena iraisana eto Madagasikara ny kianja. Anisan’ny misedra izany ny eo amin’ny tontolon’ny rugby. Resadresaka nifanaovana tamin-dRakotomalala Marcel, filohan’ny federasiona.
Gazety Taratra (*) : Andriamatoa filohan’ny federasiona, miteraka resabe ny kianja filalaovana rugby eto amintsika. Inona ny tena zava-misy mahakasika azy ity?
Rakotomalala Marcel (-) : Tsy ampy tokoa ny kianja hilalaovana rugby, indrindra ny eto Analamanga. Tsy ny eto ihany anefa fa voakasik’izany koa ny any amin’ireo faritra toa ny any Matsiatra Ambony, Boeny sy ny hafa. Efa nisy ny resaka nifanaovana tamin’ny tomponandraiki-panjakana ary mbola manohy izany izahay hatramin’izao. Mikasa ihany koa hihaona amin’ny ben’ny tanànan’Antananarivo, mikasika ny kianjan’Anosizato manokana, izay an’ny kaominina nefa misy fikambanana milaza fa efa namidy tamin’ny karana izy io. Taratasy fampivarotana tamin’ny taona 1999, nosoniavin’ny filohan’ny delegasiona manokana (PDS) tamin’izany, toa milaza izany. Misy zavatra hafahafa ao ambadik’izany ary tafiditra amin’izany ilay fikambanana, ka tsy hanaiky izany mihitsy izaho filohan’ny federasiona sy ny mpilalao rehetra. Marihina fa ny seksiona Atsimondrano sy Antananarivo Renivohitra, miaraka amin’ireo faritra hafa toa an’i Tanjombato sy ny manodidina, no tena milalao sy mampiasa io kianja io. Raha tsiahivina, an’ny mon père izy io teo aloha, avy eo, lasan’ny kaominina, ka ny fokontany Anosizato Andrefana niandraikitra izany. Tamin’ny taon-dasa, raha tsaroantsika, nanome vola ho an’ny fokontany ny federasiona nikarakarana sy nanamboarana azy io, ka tsy mety raha atao antsojay toy izany.
Ny amin’ny kianjan’Antanimena indray, marihiko tsara fa fotodrafitrasa ho an’ny rugby io, hatramin’izay, saingy ny Madarail no miandraikitra azy ka mbola mitady fihaonana amin-dry zareo ao amin’ny Madarail izahay, hiresahana momba azy io, saingy tsy mbola voaray aloha hatreto.
(* ): Ahoana indray ny mahakasika ilay raharaha mampifanolana ny “junior”?
(-): Efa iny ny fanapahan-kevitry ny teknisianina sy ny ligin’Analamanga fa nandresy «par forfait» ny FTM Manjakaray, nanoloana ny USA Ankadifotsy, teo amin’ny sokajy «junior». Tsy misy idiran’ny federasiona izany, saingy marihiko fotsiny fa miainga any amin’ny seksiona sy ny ligy, izay manamarina ary manasonia izany, ny fikarakarana ny kara-pilalaovana, avy eo vao tonga aty amin’ny federasiona, manamboatra izany, araka ny lisitra fehizoro ary mampiditra izany ao anatin’ny “base des données”.
(*) : Aiza ho aiza ny fifidianana, eo anivon’ny rugby ?
(-): Efa ao anatin’ny fanomanana azy mihitsy izahay izao. Manomboka amin’ny volana marsa any an’ny klioba, ary ny volana aprily aorian’ny fahavitan’ny fifaninanam-pirenena ny an’ny seksiona sy ny ligy ary ny volana mey ny an’ny federasiona. Misy ny rafitra sy ny fepetra vaovao napetraka, indrindra eo amin’ireo olona hilatsaka hofidina. Takina ny fananana mari-pahaizana oniversite sy ny an’ny federasiona iraisam-pirenena (IRB). Ny traikefa eo amin’ny fitantanana ny tontolon’ny rugby, izay farafaharatsiny efa-taona, izany hoe : mahafantatra tsara ny tontolon’ny rugby.
(*): Ahoana ny Makis sy ny Lalao Olympika (JO)
(-): Araka ny efa fantatsika, hiatrika ny fifanintsanana hiatrehana izany ny Makis vehivavy, eo amin’ny rugby à VII, amin’ity volana febroary ity, izay hatao any Dublin. Ny lehilahy kosa, mbola miandry ny valin-tenin’i Afrika Atsimo. Raha toa ka miala toy ny an’ny vehivavy ny Springboks, miatrika izany koa ny lehilahy ka ny volana jona ny hanaovana izany, any Monaco.